Czech Republic inorambidza vanhu vasina kubayiwa kubva munzvimbo dzese dzeveruzhinji
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Czechia Breaking News » Czech Republic inorambidza vanhu vasina kubayiwa kubva munzvimbo dzese dzeveruzhinji
Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Czechia Breaking News • Health News • nhau • vanhu • Kutarisirwa • chengetedzo • Shopping • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Czech Republic inorambidza vanhu vasina kubayiwa kubva munzvimbo dzese dzeveruzhinji.
Vagari vekuCzech vasina kubaiwa utachiona hweCOVID-19 vacharambidzwa kupinda munzvimbo dzese dzeveruzhinji semaresitorendi, mabhaisikopo nezvitoro kutanga kubva Muvhuro, Mbudzi 22.
Czech Republic iri kuona spike muhutachiona, ine rekodhi 22,479 nyaya nyowani dzakataurwa neChipiri.
Nhamba yevakafa iri kuwedzera; mamiriro acho ezvinhu akaoma. Vaccination ndiyo yega mhinduro, hapana imwe.
Mutungamiriri weCzech akachema-chema vanhu vasina kubayiwa nekuvharisa zvipatara uye kudzivirira kurapwa kusvika kune vane zvimwe zvirwere.
Czech RepublicMutungamiriri wehurumende ari kubuda, Andrej Babis akazivisa kuti nyika ichatora inonzi inonzi Bavarian modhi kubva Muvhuro svondo rinouya, ichirambidza avo vasina kuwana mushonga weCOVID-19 kupinda munzvimbo dzeveruzhinji. Avo vachangopora kubva kuhutachiona vachabvumidzwa kupinda.
The Bavaria modhi inoreva yakasimba anti-COVID matanho akaunzwa mudunhu rekumaodzanyemba kweGerman. Markus Soder, BavariaMutungamiriri wehurumende, akati pakanga pasina sarudzo kunze kwekuita "rudzi rwekuvhara vasina kubayiwa," vachitaura kuwedzera kumanikidza kuzvipatara nevashandi vekurapa.
Czech Republic vagari vasina kubaiwa nhomba yeCOVID-19 vacharambidzwa kupinda munzvimbo dzese dzeveruzhinji semaresitorendi, mabhaisikopo nezvitoro kutanga kubva Muvhuro, Mbudzi 22.
Negative COVID-19 bvunzo haichagamuchirwi.
Mutungamiriri wehurumende akati kuzviongorora kuchabviswa zvachose, sezvo vaichema vanhu vasina kubayiwa nekuvharisa zvipatara nekudzivirira kurapwa kusvika kune vane zvimwe zvirwere.
“Nhamba yevakafa iri kuwedzera; mamiriro acho ezvinhu akaoma. Vaccination ndiyo mhinduro chete, hapana imwe,” akawedzera.
Nyika ichapinda mukuvhara zvishoma kwevasina kucheneswa kubva Muvhuro mangwanani, vachifunga kuti zvirambidzo zvabvumidzwa nedare remakurukota nhasi.
“Tichasuma Bavaria modhi kubva Svondo kusvika Muvhuro. Izvi zvinoreva kuti kupinda mumaresitorendi, nzvimbo dzemasevhisi, kana zviitiko zvakawanda zvinotenderwa chete kune vanobaiwa kana vanopona. Avo vanobaiwa mushonga mumwe chete vanofanirwa kuongororwa PCR,” Babis akadaro paTV yemuno.
The Czech Republic iri kuona spike muhutachiona hweCCIDID-19, iine rekodhi 22,479 nyaya nyowani dzakataurwa neChipiri ichi.
Nepo 68% yevanhu vanobaiwa kuGermany, uye 65% muAustria, vanongodarika makumi matanhatu muzana vanobaiwa Czech Republic.